Prof. Jawaari oo khudbad dar-daaran iyo cafis u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Prof. Jawaari oo khudbad dar-daaran iyo cafis u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya (DHAGEYSO)
Kulan ay maanta xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxay uga hadleen waxyaabihii baarlamaanka u qabsoomay mudadii 4-ta sano ugu dambeysay ee uu dhisnaa.
Shirkaasi oo uu maanta shir gudoominaayay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa halkaasi khudbad dar-daaran iyo is-cafis ka jeediyay.
Prof. Jawaari ayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kula dar-daarmay inay is-cafiyaan, hadii ay jiraan wax khaladaad ah oo la iska tabanaayo intii ay wada shaqeynayeen.
“Maanta oo aan sanad-guuradii afaraad aa joogno, waxaan rabaa dhamaan xildhibaanadda, howlwadeenada, ciidamada amniga ee baarlamaanka, iyo sidoo kale dhamaan intii ila shaqeynaysay, inaan ka codsado inay i cafiyaan hadii ay wax-dhibaato ah iga tirsanayaan, anigane waa idin cafiyay, Ilaahayne aan weydiisano cafis” Sidaas waxaa yiri Gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Sidoo kale, gudoomiye Jawaari ayaa u mahad celiyay dhamaan xildhibaanada iyo howl-wadeenadda baarlamaanka, isagoona dhinaca kale cafis weydiistay dhamaan shacabka Soomaaliyeed, maadaama ay jiri karaa waxyaabo aysan jecleysan oo ka dhacay baarlamaanka ama shaqsiyan isaga ahaan.